Eastleigh oo laga cabsi qabo aargoosi - BBC Somali
Eastleigh oo laga cabsi qabo aargoosi
Cabdifitaax Ibraahim Cagayare BBCSomali.com
Image caption Soomaalida Kenya ayaa u soo gurmatay askarta Kenya iyagoo u keenay cunto iyo cabitaan.
Walaac ayaa waxaa hareeyay dadka ku nool xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Eastleigh ee magaalada Nairobi, xilli ay dadka ka warsugayaan waxa ka soo bixi doona iska hor imaadyadii ka soconayay xarunta loo dukaamaysi tegi jiray ee Westgate. Hasayeeshee dad badan ayaa sidoo kale waxa ay ka careysan yihiin weerarka iyagoo isu yimid oo kaalmo u aruuriyay dadkii ay dhibaatada soo gaartay, sida ay sameeyeen dadka kale ee Kenyanka ah.
Eastleigh waa xaafad ku taal dhinaca bari ee caasimada Kenya, waxaana si weyn u degan Soomaali isugu jirto Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliya, waxaana loogu yeeraa “Muqdisho Yareey”.
Waa xarun weyn oo ganacsi, oo ganacsatada bariga Afrika ayaa halkan u yimaado in ay ka dukaameystaan, waxaana suuqa xaafada ku yaal lagu tiriyaa in uu yahay mid ka mid ah suuqyada ugu waa weyn gobolka.
Caadiyan waa meel aad u mashquul badan, iyadoo qofkastaa uu tiisa ku mashquulsan yahay laga soo bilaabo dadka wax wareejiyo lagu soo maro dadka iibiyo alaabaha jumlada iyo tafaariiqda, laguna yimaado ganacsatada suuqa furan, qofwalba waxa uu ku mashquulsan yahay sidii uu ula soo bixi lahaa wixii uu ku noolaan lahaa.
Kaddib markii ay kooxda Islaamiga ah ee ka jirta Soomaaliya ee Alshabaab ay sheegatay in ay ka dambeysay weerarkii xarunta laga dukaameysto ee Westgate, ayaa qaar ka mid ah dadka ku nool Eastleigh waxa ay ka walaacsan yihiin suuragalnimada in ay soo beegsadaan dadka kale ee Kenyaanka ah.
Sanad ka hor, waxaa jiray isku dhacyo ku saleysnaa qowmiyad oo u dhaxeeyay Soomaalida iyo bulshooyinka kale ee Kenya kaddib markii bas marayay xaafada Eastleigh ay sida la sheegay qarxiyeen kooxda Alshabaab, halkaa oo ay ku dhinteen ugu yaraan todoba qof.
Image caption Soomaalida ayaa hada ka hor weerar loo gaystay qaraxyo kadib.
' Deegaan Aamin ah sanad ka hor'
Sida uu leeyahay Cabdirisaaq Nuur, oo ah wiil dhalinyaro Soomaali ah oo isagoo qaxooti ah ku noolaa Nairobi in kabadan 15 sano, nolosha ayaa si weyn isu badashay oo saameysay qaar badan oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaalida.
Cabdirisaaq ayaa ka soo cararay Soomaaliya isagoo raadinaya deegaan aamin ah oo uu ku noolaado gudaha Kenya.
“Ma garanayo wax aan iraahdo, maxay waxan ugu sameynayaan dad aan waxba galabsan, dad aan hubeysneyn – dadkan weerarka soo qaaday cadaw uma ahan oo kaliya dadka aan Muslimiinta aheyn ee bini’aadamka oo dhan ayeey cadaw u yihiin,” ayuu yiri.
"Waxaan cambaaraynayaa weerarka, waxaana filayaa in bulshooyinka kale ay fahmi doonaan in aan ka soo horjeedno fikradaas oo aan xanuunka la wadaageyno."
Maxamed Cali, waa wiil kale oo dhaliyara ah oo degan Eastleigh, isna waxa uu sheegay in uu ka walaacsan yahay in bulshooyinka kale ay soo beegsadaan haddii dadka weerarka soo qaaday ay noqdaan mudaadiniin Soomaali ah ama asal ahaan dad ka soo jeeda Soomaaliya.
Waxa uu u malaynayaa in dhibaato ay ka iman karto qaar ka mid bulshooyinka kale ama mas’uuliyiinta Kenya, kuwaas oo horay loogu eedeeyay in ay dhibaato u geysteen qowmiyadda Soomaalida mar ay baarayeen maleeshiyaadka Islaamiga ah.
Image caption Soomaalida ayaa ku leh suuq wayn xaafada Easleigh ee Nairobi.
Gudoomiyaha Guddiga Ganacsatada ee Eastleigh, Xasan Guuleed, ayaa sheegay in ay ka war sugayaan waxa ka soo baxo weerarkii xarunta laga dukaamaysto si ay u ogaadaan jawaabta ay bixiyaan bulshooyinka kale ee Kenyanka ah.
Gudoomiyaha Guddiga Ganacsatada ee Eastleigh.
“Kama saari karno meesha in ay jiraan canaasiir dambiilayaal oo doonaya in ay ka faa’iidaystaan xaalada si ay u dhibaan ama u kadeedaan xubnaha bulshada Soomaalida” Xasan Guuleed, Gudoomiyaha Guddiga Ganacsatada ee Eastleigh.
Mar aan waydiiyay suuragalnimada in weeraro aargoosi ah lagu soo qaado bulshada Soomaalida, ayaa Mr Guuleed waxa uu yiri “Ma filayno midaa balse meesha kama saari karno in canaasiir dambiilayaal ah ay ka faa’iidaystaan xaalada oo ay dhibaan xubnaha bulshada Soomaalida”.
Ganacsadahan ayaa sheegay in aanay jirin bulsho loo beegsan karo weerarka lagu qaaday xarunta laga dukaamaysan jiray ee Westgate sababtoo ah buu leeyahay waxa uu ahaa ficil ay geysteen argagixiso iyo weliba dambi caalami ah oo aanan loo tiirin karin bulsho ama qaran gooni ah.
Bulshada soomaalida ah ayaa waxa ay ku biireen qaranka intiisa kale si ay u muujiyaan in ay la jiraan oo ay garab taagan yihiin dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii Westgate, iyagoo sameeyay xarumo dhiig lagu shubo iyo kuwo kale oo lagu aruuriyo lacago, raashin iyo waxyaabaha kale ee loo baahan yahay si ay ugu caawiyaan dadka ay dhibaatada soo gaartay.
Xildhibaanka deegaanka Kamukunji, Yuusuf Xasan, waa Soomaalida Kenya, waxa uu ku dhaawacmay weerar ay ku dhinteen laba qof oo Disembartii la soo dhaafay ka dhacay Eastleigh. Xildhibaanka ayaa markaa waxa uu wadahadal la lahaa qaar ka mid ah xubnaha bulshada, waxa ay aheyd Talaado cishaha kaddib oo banaanka hore ee misaajidka Alhidaayah mar uu nin ku soo tuuray bambaano dhaawacday sagaal qof.
Yuusuf Xasan ayaa lugaha ka jajabay haatana waxaa lagu wadaa baabuurka curyaamiinta.
Weerarka lagu qaaday xildhibaanka Eastleigh ayaa waxa uu kiciyay mudaharaadyo watay rabshado, iyadoo ay isu soo baxeen dhalinyaro xiray wadooyinka shaagagna gubayay.
Kenya ayaa ciidamadeeda u dirtay Soomaaliya laba sano ka hor si ay ula dagaalanto kooxda Alshabaab, kaddib markii la sheegay in kooxda ay afduubyo u geysteen dalxiisayaal iyo dad ka shaqeeya gargaarka oo ay ka afduubteen xeebta Kenya iyo xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, halkaa oo hooy u ah kumanaan kun oo qaxooti Soomaali ah oo ku nool gudaha Kenya.
Ciidamada waxa ay ka mid yihiin ilaa 17,000 kun oo ciidamada Midowga Afrika ah ee taageeraya dowladda Soomaaliya.